Klout Score Reinvented ... na Ọ masịrị m! | Martech Zone
Anurum banyere Klout nwa oge gara aga mana etinyeghị m uche nke ukwuu rue mgbe m zutere ụfọdụ ndị otu Klout na Las Vegas. M nwalere ya ma chọpụta na ụfọdụ akara akara na-efu. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime anyị nwere ọtụtụ peeji, ọtụtụ akụkọ, na akụkọ ntolite n'ịntanetị nke gbasara afọ iri… mana ihe niile emeghị Klout.
Oge ikpeazụ Klout emelitere ọ bụ akara, ha tụfuru m kpamkpam. Ihe akara a metụtara ọrụ na-adịbeghị anya… ọbụna karịa ka ọ dị na mbụ. Akara m na-ada na-akụzighị m ihe ọ bụla gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihi ya, akwụsịrị m ikiri.
Klout ọ gwụchala mmelite kachasị na akara m na-egwu ya kemgbe ha malitere ya. M na-ele anya elu influencers, e nlekota m na netwọk, na a na-eji Klout mobile ngwa na kwa ụbọchị (ọ bụ a bit na-eri ahụ… nweta ya). Otu ihe dị mma nke ngwa mkpanaka ahụ bụ na ịnwere ike igosipụta akara gị dịka ọnụọgụ anya na ngwa ahụ n'onwe ya. Don'tkwesighi imeghe ngwa ahụ iji hụ akara gị ọzọ!
Otu n’ime ihe kacha amasị m bụ ihe na - eme ma m pịa profaịlụ ọzọ. Akwụkwọ dị ike na-ewepụta ọmarịcha eserese na-egosi ebe m kwesịrị ijikọ na onye na-emetụta ihe, na isiokwu ndị dị na ya, na ịhụ ndị na-eme ihe ike anyị nwere. Nke a bụ kediegwu maka ihe ọ bụla marketer…. ike ịchọ site na isiokwu ma ọ bụ influencer, na ịghọta ebe na otu esi jikọọ na influencer ahụ bụ nnukwu uru ịgbasa iru gị.
M ka ga-ahụ n'anya ịhụ Klout na-enye ụfọdụ ndụmọdụ na ntanetị nke usoro Klout. Ọ bụ ezie na enwere m obi ụtọ ịkpọ m Onye Ndú Onye Ọmụma Echiche, Ọ ga-amasị m ịhụ ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụ omume kachasị mma iji nyere m aka ịmeziwanye usoro m na iji netwọkụ mmekọrịta… ikekwe ịkekọrịta na isonye. Achọghị m mbanye akara Klout m, mana m ga-achọ ịhụ ma m nwere ike ịhazigharị omume m ma mee ka Klout gwa m ma ọ naghị arụ ọrụ.
Nke a bụ vidiyo Klout na akara ọhụụ score na nhụchalụ nke Klout Moments nke na-ebido n'oge adịghị anya:
Ihe Klout ugbu a tinye ihe karịrị akara 400 site na netwọk asaa dị iche iche ma na-edozi ya kwa ụbọchị iji melite akara gị.
Mkpọtụrụ: A aha gị na post na-egosi mgbalị-eso gị kpọmkwem.
Na-amasị: Omume kachasị mfe na-egosi njikọ aka na ọdịnaya ị mepụtara.
Comments: Dịka mmeghachi omume nke ọdịnaya ịkekọrịta, ihe ị na-ekwu na-egosipụtakwa aka gị na ntanetị.
Ndị debanyere aha: Ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha bụ mmetụta na-adịgide adịgide nke na-eto eto n'oge na-adịghị anya.
Mgbidi Ozi: Ozi na mgbidi gị na-egosi mmetụta na njikọ aka.
Ndị enyị: Ọgụgụ ọnụ na-atụle iru netwọk gị mana ọ dị mkpa karịa otu netwọkụ gị na-etinye na ọdịnaya gị.
Retweets: Retweets na-abawanye ikike gị site na ikpughe ọdịnaya gị na netwọkụ ndị na-eso ụzọ.
Mkpọtụrụ: Ndị mmadụ na-achọ gị ntị site na ịkọ banyere gị bụ ihe mgbaàmà siri ike nke mmetụta. Anyị na-eburu n'uche ihe dị iche iche dị na ụdị mkpọtụ, gụnyere "via" na "cc".
Depụta ndị otu: Banye na ndepụta ndị ọrụ ndị ọzọ gwọrọ na-egosi mpaghara mmetụta gị.
na-eso ụzọ: Ndị na-eso ụzọ bụ otu ihe na akara gị, mana anyị na-akwado nnabata karịa ndị na-ege ntị.
zaghachiri, sị: Nzaghachi na-egosi na ị na-ejikọ ọdịnaya gị na ọdịnaya gị oge niile.
+ 1 si: Omume kachasị mfe na-egosi njikọ aka na ọdịnaya ị mepụtara.
Mbughari: Reshares na-ebuli mmetụta gị site na ikpughe ọdịnaya gị na netwọk dị na Google+.
aha: Aha gị a kọrọ na LinkedIn bụ ihe mgbaàmà nke mmetụta ụwa gị ma na-adịgide.
Njikọ: Eserese njikọ gị na-enyere aka ime ka mmetụta ụwa gị nwee.
Ndị na-atụ aro: Ndị na-akwado na netwọkụ gị na-agbakwunye mgbama ndị ọzọ na ntinye aka LinkedIn na-enye akara gị.
Atụmatụ mere: Ọnụọgụ nke aro ị hapụrụ nke emechaala na-egosi ikike ị nwere inwe mmetụta n'ahụ ndị ọzọ n'akụkụ anọ.
+ K natara: Nata + K na-abawanye akara Klout gị site na ọnụọgụ nke dị na usoro ụbọchị 90 ọ bụla iji chebe iguzosi ike n'ezi ihe nke Akara.
Peeji dị mkpa: Nyocha site na itinye PageRank algorithm megide eserese peeji nke Wikipedia.
Inlinks na Outlinks ruru: Tụnyere ọnụ ọgụgụ nke inbound njikọ na peeji nke ọnụ ọgụgụ nke ndị outbound njikọ.
Ọnụ ọgụgụ nke njikọ: Jikọtara ọnụ ọgụgụ nke njikọ inbound na ibe.
Kudos na Klout maka ịmaliteghachi onwe ya… ha abụrụla nnukwu ihe maka ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi na afọ ole na ole mana enwere m mmasị na otu ha (a maara nke ọma dị ka Kloutlaws) ka na-agba mbọ ịzụlite usoro dị mfe iji chọpụta ma nyochaa mmetụta dị na ntanetị.
Tags: kedu ka esi atụ kloutkloutklout akaraihe a klout akara